अजोड इन्स्योरेन्सको साधारण सभा आज हुँदै, के-के छन् एजेण्डा ? - Artha Path Artha Path
अजोड इन्स्योरेन्सको साधारण सभा आज हुँदै, के-के छन् एजेण्डा ?
प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७८, मंगलवार
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तेस्रो वार्षिक साधारण सभा आज (मंगलबार) हुँदै छ । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको आज (बैशाख ७ गते, मंगलबार) वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, त्रिपुरेश्वरमा तेस्रो वार्षिक साधारण ११ बजे सभा हुँदै छ ।
सभाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ ।
साधारण सभा प्रयोजनार्थ इन्स्योरेन्सले चैत २४ गतेदेखि बैशाख ७ गतेसम्म बुकक्लोज गर्ने भएको छ । त्यसैले, चैत २३ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम शेयरधनीहरुले इन्स्योरेन्सको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् ।
कम्पनीले बीमा समितिको निर्देशन पछि कम्पनीको चैत्र २५ गते, बुधबार आकस्मिक बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव हाललाई स्थगन गरेको छ । कम्पनीले चैत्र १७ गते ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्तावसहित आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको थियो । तर यो हकप्रदको सूचना बाहिरिनु भन्दा अगावै कम्पनीको आक्रामक कारोबार भइरहेको थियो । सोही विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सोबोन) ले छानबिन समिती गठन गरेको थियो ।
विवाहमा दुईवटा गाडी र १५ जना जन्ती मात्र लैजान पाइने
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निषेधाज्ञाको समय विवाहमा १५ जना व्यक्ति र २ वटा
एनसीसी बैंकको संस्थापक शेयर विक्रीमा,क-कस्ले दिन पाउने छन् आवेदन ?
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक लिमिटेडले संस्थापक शेयर विक्रि गर्न लागेको छ
कठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले संचारमाध्यमलाई उद्योगका रुपमा समेट्न माग गरेको छ
रिलायन्स फाइनान्सको साधारण सभाद्वारा १०.५३ प्रतिशत लाभांश पारित, उपयुक्त कम्पनीसँग मर्ज हुने
काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको ११ औँ वार्षिक साधारणसभा बुधबार सम्पन्न भएको छ । आज
ठूला ६ वटा लघुवित्तलाई यही वर्षदेखि एनएफआरएस लागू,
सिटिजन्स बैंकको नाफामा छलाङ, ४१ प्रतिसत बढ्यो, ९
देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका ४ सांसदलाई ओलीको डण्डा,
कुमारी बैंकको तेस्रो त्रैमासमा देखियो चमक, खुद नाफा